Ciidamada Israil oo toogasho ku dilay Falastiinigii u horeeyey sanadkan 2018 – Radio Daljir
Janaayo 4, 2018 7:12 b 0
Ciidamada Israil ayaa toogasho ku dilay 17 jir Falastiini ah cirifka waqooyi ee magaalada Daanta Galbeed ee Ramala, sida laga soo xigtay saraakiil katirsan Falastiiniyiinta.
Wasaaradda caafimaadka ee Falastiin ayaa xaqiijisay geerida Muscab Firas Al-tammiimi oo kasoo jeeda deegaanka Deir Nitham ee magaalada Ramala, toogashada ayaa dhacday Arbacadii.
“Waxaa uu geeriyooday kadib ciidamada haysta magaalada markii ay rasaas ay ku fureen kaga dhacday qoorta” ayuu yiri Maria Aqraa oo ah afhayeen u hadlay wasaaradda caafimaadka ee Falastiin.
Sida laga soo xigtay jariiradda Times of Israel, ciidamada Israil ayaa sheegay Mucab inuu u muuqday inuu haystay qori, lamana xaqiijin karo inuu hubaysnaa iyo in kalle.
Afhayeen u hadlay ciidamada Isra’il ayaa laga soo xigtay inay baaritaan kusamaynayaan dhacdadaasi uu ku geeriyooday wiilka yar ee reer Falastiin.